United Bonds – United Bonds
Crypto currency (USDT Stablecoin) ဖြင့် ၀ယ်ယူသူများ
တစ်ဦးချင်း၀ယ်ယူသူများ ဖြည့်သွင်းရမည့် ပုံစံ
အဖွဲ့လိုက် ၀ယ်ယူသူများ ဖြည့်သွင်းရမည့် ပုံစံ
မြန်မာနိုင်ငံသားများ ဖြည့်သွင်းရမည့် ပုံစံ
နိုင်ငံခြားသားများ ဖြည့်သွင်းရမည့် ပုံစံ
အဖွဲ့လိုက်၀ယ်ယူသူများ ဖြည့်သွင်းရမည့် ပုံစံ
ကိုယ်စားလှယ်မှတဆင့် ဝယ်ယူသူများ ဖြည့်သွင်းရမည့် ပုံစံ
QR Code အားစစ်ဆေးရန်
Order Id ဖြင့်စစ်ဆေးရန်
ပုံစံ(က) ကိုဖြည့်သွင်းပြီးလျှင် ငွေတိုက်စာချုပ်ဝယ်ယူရန် လိုအပ်သော အသေးစိတ်အချက်အလက်များ ပါဝင်သည့် အီးမေးလ်တစ်စောင် ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်၊၊
ပုံစံ (က) ကို ဤနေရာတွင် ရယူပါ
Crypto currency (USDT Stablecoin) ဖြင့် ဝယ်ယူသူများ ပုံစံ(ခ) ဖြည့်သွင်းရန်
အီးမေးလ်သို့ ပေးပို့ထားသော Wallet Address သို့ ကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ၊ အခြားယုံကြည်ရသူထံမှတဆင့်မှဖြစ်စေ ငွေလွှဲပြီးပါက ငွေလွှဲပြီးကြောင်း အထောက်အထားပြေစာနှင့်တကွ ပုံစံ(ခ) ကို မပျက်မကွက် ဖြည့်သွင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။
ငွေလွှဲထားသည့် အထောက်အထား စာရွက်စာတမ်းကို ပုံစံ(ခ)တွင် ပူးတွဲဖိုင် (Attached File) အဖြစ် ပေးပို့ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ပုံစံ(က) ဖြည့်အပြီး အီးမေးလ်တွင်ရရှိသော Order ID နံပါတ်ကို ဘဏ်သို့ငွေလွှဲရာတွင် Reference Number အဖြစ်ဖြင့်ထည့်ပေးရပါမည်။ ယင်း Order ID နံပါတ်ကို ပုံစံ(ခ) ဖြည့်ရာတွင်လည်း ဖြည့်သွင်းပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။
အဖွဲ့အတွက် ၀ယ်ယူပေးမည့်သူသည် ပုံစံ(ခ)တွင်ပါ၀င်သော “၀ယ်ယူသူများ၏ အချက်များ” ဇယားတွင် ၀ယ်ယူသူများ၏ အချက်အလက်များကို တစ်ဦးချင်းစီအတွက် တိကျမှန်ကန်စွာ ဖြည့်သွင်းပေးပို့ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ငွေတိုက်စာချုပ်ကို စုစုပေါင်းလူ(၁၀)ဦးအထိ စုပေါင်းငွေလွှဲကာ ၀ယ်ယူနိုင်ပါသည်။
ပုံစံ (ခ) ဖြည့်သွင်းပြီး အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ စီမံကိန်း၊ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဝန်ကြီးဌာနမှ စီစစ်၍ ငွေလက်ခံရရှိပြီး (၁၄)ရက်အတွင်း ငွေတိုက်စာချုပ်ကို အီးမေးလ်မှ လက်ခံရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
တစ်ဦးချင်း ဝယ်ယူသူများ ဖြည့်သွင်းရန် ပုံစံ(ခ)
ပုံစံ (ခ) ကို ဤနေရာတွင် ရယူပါ
အဖွဲ့လိုက် ဝယ်ယူသူများ ဖြည့်သွင်းရန် ပုံစံ(ခ)
ဘဏ်အကောင့်ဖြင့် ဝယ်ယူသူများ ပုံစံ(ခ) ဖြည့်သွင်းရန်
နိုင်ငံခြားဘဏ်သို့ ကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ၊ အခြားယုံကြည်ရသူထံမှတဆင့်မှဖြစ်စေ ငွေလွှဲပြီးပါက ငွေလွှဲပြီးကြောင်း အထောက်အထားပြေစာနှင့်တကွ ပုံစံ(ခ) ကို မပျက်မကွက် ဖြည့်သွင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။
ကိုယ်စားလှယ်မှတဆင့် ဝယ်ယူသူများ ဖြည့်သွင်းရန်
ငွေတိုက်စာချုပ်ဝယ်ယူသူသည် ငွေတိုက်စာချုပ်ပမာဏ၏ ကျသင့်ငွေကို ကိုယ်စားလှယ်အားပေးချေရပါမည်။
Agent ORDER ID ပါသော ငွေရပြေစာကို ဝယ်ယူသူ၏ အီးမေးလ်သို့ ပို့ပေးရန် ငွေတိုက်စာချုပ်ကိုယ်စားလှယ်မှ စီစဉ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
ငွေတိုက်စာချုပ်ဝယ်ယူသူသည် ထို Agent ORDER ID ကို “ကိုယ်စားလှယ်ထံမှ တဆင့်ဝယ်ယူသူများ” ပုံစံတွင် မှန်ကန်စွာဖြည့်သွင်းပေးရပါမည်။
ထို Agent ORDER ID ပါသော ငွေရပြေစာ အထောက်အထားကို “ကိုယ်စားလှယ်ထံမှ တဆင့်ဝယ်ယူသူများ” ပုံစံတွင် ပူးတွဲဖိုင် (Attached File) အဖြစ် မပျက်မကွက်ပေးပို့ရပါမည်။
ပုံစံကို ဤနေရာတွင် ရယူပါ
ငွေတိုက်စာချုပ်များ၏ တန်ဖိုးကို အမေရိကန်ဒေါ်လာငွေဖြင့် သတ်မှတ်သည်။
ငွေတိုက်စာချုပ်များ၏ တန်ဖိုးသည် ဒေါ်လာငွေ ၁၀၀၊ ၅၀၀၊ ၁၀၀၀၊ ၅၀၀၀ ဟု အသီးသီးသတ်မှတ်သည်။
ငွေတိုက်စာချုပ်များ၏ အတိုးရာခိုင်နှုန်းကို 0% (အတိုးမဲ့)ဟု သတ်မှတ်သည်။
ငွေတိုက်စာချုပ်များကို အစိုးရက ဝယ်ယူလိုသူများလက်သို့ ရောင်းနှံရာတွင် သတ်မှတ်ထားသည့် တရားဝင်တန်ဖိုး အတိုင်းသာရောင်းချသွားမည်ဖြစ်ပြီး သာမန်အခြားအတိုးမဲ့ငွေတိုက်စာချုပ်များကဲ့သို့ လျှော့ဈေးဖြင့် ဈေးလျှော့ရောင်းချပေးခြင်းပြုမည်မဟုတ်ပါ။
ငွေတိုက်စာချုပ်သည် ထုတ်သည့်နေ့မှ (၂)နှစ်အကြာတွင် သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည်။
ငွေတိုက်စာချုပ်များကို သက်တမ်းမကုန်ခင် လွှဲပြောင်းရောင်းချခွင့် မပြုပါ။
သက်တမ်းကုန်ချိန်တွင် သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ လွှဲပြောင်းခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း၊ ဝယ်ယူခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
မြန်မာ့မြေပေါ်မှ အကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်စနစ် အမြန်ဆုံး ချုပ်ငြိမ်းပျောက်ကွယ်သွားစေရေးအတွက် လိုအပ်လျက်ရှိသည့် ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေ လုံလောက်စွာ ရရှိစေရန်။
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၏ ငွေတိုက်စာချုပ်၀ယ်ယူရန်အတွက် ပုံစံ(က)နှင့် ပုံစံ(ခ) ကို မပျက်မကွက် ဖြည့်သွင်းရန်
(၁) Order ID နံပါတ်
(၂) အမျိုးသားညီညွတ်ရေး အစိုးရ၏ တရားဝင် ဘဏ်စာရင်း အမှတ်
(၃) ငွေတိုက်စာချုပ်တန်ဖိုး ငွေပေးဆောင်ပြီးကြောင်း ပုံစံ (ခ)
တွင် ပါဝင်သော အီးမေးလ်ကို unitedbonds-nug.org မှ ပို့ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်၊၊
ငွေတိုက်စာချုပ်၀ယ်ယူသူ၏ ဘဏ်စာရင်းမှ အမျိုးသားညီညွတ်ရေး အစိုးရ၏ ဘဏ်စာရင်းသို့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငွေလွှဲပို့စံနစ် (International Bank to Bank Transfer) တမျိုးမျိုးဖြင့် ပေးပို့ရန်ဖြစ်ပါသည်။
ထိုအီးမေးလ် တွင် ဖော်ပြထားသော Order ID နံပါတ်ကို တိကျသေချာစွာမှတ်သားထားပြီး အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ၏ တရားဝင်ဘဏ်စာရင်းအမှတ်သို့ ငွေလွှဲပေးပို့သည့်အခါတွင် အဆိုပါ Order ID နံပါတ်အား ရည်ညွှန်းချက် (Reference) အဖြစ် ထည့်ပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်၊၊
ငွေလွှဲပြီးကြောင်း ပုံစံ(ခ) ကို ဖြင့် မပျက်မကွက် ဖြည့်သွင်းရပါမည်။
ပုံစံ (ခ) ကိုဖြည့်သွင်းရာတွင်လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များနှင့် မိမိငွေလွှဲထားသော အထောက်အထား များကို ပူးတွဲဖိုင် (Attached File) အဖြစ် ပေးပို့ရမည်ဖြစ်ပါသည်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဝန်ကြီးဌာနမှ လက်ခံရရှိငွေကို စစ်ဆေးပြီးနောက် လူကြီးမင်း ၀ယ်ယူထားသော ငွေတိုက်စာချုပ်ကို (၁၄) ရက်အတွင်း ပြန်လည် ပို့ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်၊၊
၎င်းစာချုပ်သည် ငွေပြန်လည်ထုတ်ယူရန် လူကြီးမင်း၏ တစ်ခုတည်းသော သက်သေအထောက်အထားမှတ်တမ်းဖြစ်သည့်အတွက် သေချာစွာ သိမ်းဆည်းထားရန်လိုအပ်ပါသည်၊၊
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၏ တရားဝင် ဘဏ်အကောင့်သို့ ငွေလွှဲချိန်တွင် လူကြီးမင်း၏ဘဏ်မှ ကျသင့်သည့် ဘဏ်ဝန်ဆောင်ခများ (Bank Charges/ Service Fee) အား လူကြီးမင်းဘက်မှ ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်၊၊ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဌာန၏ တရားဝင် ဘဏ်အကောင့်တွင် လက်ခံရရှိသည့် ငွေပမာဏ ကိုသာ ငွေတိုက်စာချုပ်တန်ဖိုးအဖြစ် သတ်မှတ်မည်ဖြစ်သည်၊၊
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၏ တရားဝင် ဘဏ်အကောင့်သို့ ငွေဝင်ရန် ရုံးချိန် ၁ ရက်မှ ၃ ရက်အထိကြာမြင့်နိုင်ပါသည်၊၊
Reference (သို့မဟုတ်) Purpose to transfer သို့မဟုတ် Message to beneficiary တွင် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဌာနမှ ပေးပို့ထားသည့် (Order ID Number) မှလွဲ၍ အခြားမည်သည့်စကားလုံးမှ မရေးမိရန် သတိထားစေလိုပါသည်၊၊
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဝန်ကြီးဌာနမှ ပေးပို့သော အီးမေးလ် များကို Junk (သို့မဟုတ်) Spam Folder ထဲသို့ရောက်ရှိနေနိုင်သဖြင့် ယင်း Folder များထဲတွင်လည်း စစ်ဆေးစေလိုပါသည်၊၊
အဖွဲ့လိုက် ဝယ်ယူလိုသူများ အတွက် လိုအပ်သောအချက်များ
ငွေလွှဲပြီးသောအခါတွင် အဖွဲ့လိုက်၀ယ်ယူပေးမည့်သူသည် စာချုပ်တန်ဖိုးငွေကို ပေးဆောင်ပြီးကြောင်း ပုံစံ(ခ) ကို မပျက်မကွက် ဖြည့်သွင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။
ပုံစံ(ခ) ကို ဖြည့်သွင်းချိန်တွင် “၀ယ်ယူသူများ၏ အချက်များ” ဇယားတွင် ၀ယ်ယူသူများ၏ အချက်အလက်များကို တစ်ဦးချင်းစီအတွက် တိကျမှန်ကန်စွာ ဖြည့်သွင်းပေးပို့ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဥပမာ – စုပေါင်း၀ယ်ယူသူ ၃ ဦးဖြစ်လျှင် ပုံစံ(ခ) ကို (Order ID နံပါတ်) တစ်ခုတည်းကိုသာ အသုံးပြု၍ “၀ယ်ယူသူများ၏ အချက်များ” ဇယားတွင် ၀ယ်ယူသူ(၁)၊ ၀ယ်ယူသူ(၂)၊ ၀ယ်ယူသူ(၃) ဟု ၃ယောက်စာ ဖြည့်သွင်းကာ ပေးပို့ရပါမည်။
၀ယ်ယူသူတစ်ဦးစီအတွက် ငွေတိုက်စာချုပ်တစ်ခုစီ သီးသန့်ထုတ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ အဖွဲ့လိုက်ဝယ်ယူသည့် ပုံစံ(ခ)စာရင်းတွင်ပါဝင်သော ငွေပမာဏနှင့် အမျိုးသားညီညွတ်ရေး အစိုးရဘဏ်တွင် လက်ခံရရှိသည့် ငွေပမာဏ မတူညီလျှင် အမှတ်တကယ်လက်ခံရရှိသည့် ငွေပမာဏအတွက်သာ ထုတ်ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်၊၊
United Bonds ရဲ့ တရားဝင် အီးမေးလ်လိပ်စာတွေက ဘာလဲ။
United Bonds ရဲ့ တရားဝင် အီးမေးလ် လိပ်စာတွေကို @unitedbonds-nug.org နဲ့ တည်ဆောက်ထားပါတယ်။ @unitedbonds-nug.org ကနေပဲ သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက် အီးမေးလ်လိပ်စာများကို အသုံးပြု၍ ပေးပို့သွားပါမယ်။
DATA PROTECTION POLICY | COPYRIGHT © 2021. United bonds NUG. All Rights Reserved.